ထိရောက်မှု ရှိလွန်းလှတဲ့ အကူအညီတစ်ခုနဲ့ ထိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်….. – Cele Snap
ချစ်လှစွာသော ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလူမျိုးများခင်ဗျား စစ်ဘက်ကနေ လာပြီး အရပ်သားရွေးကောက်မခံရတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘန်ကောက်ကို ဒီနေ့ အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံမယ်တပ်မေ တ်ာဘက်က ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပဖို့ ဘန်ကောက်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ ဒေသခံ အရင်းအမြစ်အရ သိရပါတယ်။
ဒါမျိုးငါတို့လက်မခံဘူး. ငါတို့တကယ် လိုချင်တဲ့သူကို မဲပေးပြီးပြီ။ သူတို့တွေက ငါတို့ရဲ့ မဲ ကို လေးစားရမယ်။မြန်မာနဲ့ ထိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ စာမျက်နှာတစ်ခုထဲမှာပါလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဆို တရားမဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကို ကိုယ်စား မပြုတဲ့ ဆန္ဒပြကြပါ။
မင်းရဲ့ လှပတဲ့မြေကို လာပြီးတော့ ဒီလုပ်ရပ်က စစ်အာဏာရှင်တွေကိုလက်တွေနဲ့ ဆက်လက် တိုက်ခိုက်ဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြီးတော့ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်က လူတွေအားလုံးကို မေတ္တာတွေ ဖြန့်ဝေေ ပးနေပါတယ်။
ခဈြလှစှာသော ထိုငျးလူမြိုးမြားနှငျ့ ထိုငျးနိုငျငံရောကျ မွနျမာလူမြိုးမြားခငျဗြား စဈဘကျကနေ လာပွီး အရပျသားရှေးကောကျမခံရတဲ့ မွနျမာ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဘနျကောကျကို ဒီနေ့ အငျဒိုနီးရှားဝနျကွီးခြုပျနဲ့ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျနဲ့ တှဆေုံ့မယျတပျမေ တျာဘကျက ရှေးကောကျပှဲပွနျလညျကငျြးပဖို့ ဘနျကောကျမှာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးဖို့ရှိတယျလို့ ဒသေခံ အရငျးအမွဈအရ သိရပါတယျ။
ဒါမြိုးငါတို့လကျမခံဘူး. ငါတို့တကယျ လိုခငျြတဲ့သူကို မဲပေးပွီးပွီ။ သူတို့တှကေ ငါတို့ရဲ့ မဲ ကို လေးစားရမယျ။မွနျမာနဲ့ ထိုငျးမှာ ဒီမိုကရစေီ အစဈအမှနျ တိုကျပှဲဝငျဖို့ စာမကျြနှာတဈခုထဲမှာပါလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ဒါဆို တရားမဝငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ကို ကိုယျစား မပွုတဲ့ ဆန်ဒပွကွပါ။
မငျးရဲ့ လှပတဲ့မွကေို လာပွီးတော့ ဒီလုပျရပျက စဈအာဏာရှငျတှကေိုလကျတှနေဲ့ ဆကျလကျ တိုကျခိုကျဖို့ စှမျးဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ ပွီးတော့ လှတျလပျရေးနဲ့ ဒီမိုကရစေီ အတှကျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ ကမ်ဘာမွပေျေါက လူတှအေားလုံးကို မတ်ေတာတှေ ဖွနျ့ဝေေ ပးနပေါတယျ။